Ampefiloha : vehivavy nodarodarohan’ny polisy | NewsMada
Ampefiloha : vehivavy nodarodarohan’ny polisy
Vehivavy iray niharan’ny daroka sady nambanan’ny polisy iray tamin’ny basy, ny alakamisy lasa teo teny Ampefiloha. Milaza ity polisy nanao herisetra ity fa miasa eny amin’ny Prezidansa. Araka ny fanazavan’ny fianakavian’ilay niharam-boina, efa narahan’ilay polisy ity vehivavy niharam-boina ity ka nony tonga teny Ampefiloha, nobedain’ilay polisy sy nodarohana ary nambanana basy P.A. Nolazain’ilay polisy fa hoe nangalatra ny volamena am-badiny ity vehivavy niharam-boina ity ka tsy namelany fa nanamparany herisetra. Nahatsikaritra ny fihetsika tsy mendrika nataon’ity polisy ity avokoa ny ankamaroan’ny olona teny amin’ny manodidina an’Ampefiloha, saingy tsy afa-manoatra manoloana ny basy teny am-pelatanan’ilay polisy. Nentiny avy hatrany tao amin’ny biraon’ny polisy ao Ampefiloha ity vehivavy ity sady nosintosintoniny eran’ny lalana hatrany, araka ny fanazavana voaray.
Niakatra fampanoavana avy hatrany ilay niharam-boina ka naiditra eny amin’ny fonjan’Antanimora taorian’izay.
Somary niteraka fanafintohinana tamin’ireo mponina eny an-toerana ny fihetsika nataon’ity polisy satria nanamafy ireo mponina nahita ny zava-nitranga fa olona manana ny maha izy azy ity vehivavy ity fa araka ny fiheveran’ilay polisy. Manoloana izany, tezitra tamin’ity polisy ity ny olona teny an-toerana.
Toy ireny ve ny fihetsika tokony hataon’ny polisy rehefa hisambotra olona indrindra fa vehivavy, raha ny alahelon’ny fianakaviany. Manao antso avo amin’ny tompon’andraikitra, araka izany, mba hijery akaiky ny fihetsika tsy voahevitra ataon’ny mpitandro filaminana toy izao. Manaratsy endrika ny fianakaviamben’ny polisim-pirenena rahateo ny fisian’ny saonjo iray lohasaha toy izao. Andrasana ny tohin’ity raharaha ity fa hatreto aloha, mbola any am-ponja ilay vehivavy niharan’ny herisetra.